Maninona ny fifandraisana amin'ny ekipa no zava-dehibe kokoa noho ny Martech Stack | Martech Zone
Ny fomba fijery tsy mitombina an'i Simo Ahava momba ny kalitaon'ny data sy ny rafitry ny serasera dia namelombelona ny efitrano fandraisam-bahiny manontolo tao amin'ny Mandehana Analytics! fihaonambe. OWOX, ny mpitarika MarTech ao amin'ny faritra CIS, dia nandray ny manam-pahaizana an'arivony tamin'ity fivoriana ity hizara ny fahalalany sy ny heviny.
Ekipa BI OWOX te-hieritreritra ny hevitra naroson'i Simo Ahava ianao, izay azo antoka fa mety hampitombo ny orinasanao.
Ny kalitaon'ny data sy ny kalitaon'ny fikambanana
Miankina amin'ny olona mamakafaka azy ny kalitaon'ny angon-drakitra. Matetika isika dia hanome tsiny ny lesoka rehetra amin'ny data momba ny fitaovana, ny workflows ary ny datasets. Ara-dalàna ve izany?
Raha tsorina, ny kalitaon'ny data dia mifamatotra mivantana amin'ny fomba fifandraisantsika ao anatin'ny fikambananay. Ny kalitaon'ny fikambanana no mamaritra ny zava-drehetra, manomboka amin'ny fomba fitrandrahana angon-drakitra, tombana ary fandrefesana, mitohy amin'ny fanodinana ary mifarana amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fanapahan-kevitra.
Orinasa sy ny firafitry ny fifandraisan'izy ireo
Andao alao sary an-tsaina ny orinasa iray miavaka amin'ny fitaovana iray. Ny olona ato amin'ity orinasa ity dia mahafinaritra mahita olana sasany ary mamaha izany ho an'ny ampahan'ny B2B. Tsara ny zava-drehetra, ary tsy isalasalana fa mahafantatra orinasa mpivady toa izao ianao.
Ny voka-dratsin'ny asan'ireto orinasa ireto dia miafina amin'ny dingan'ny fotoana maharitra amin'ny fampiakarana ny takiana amin'ny kalitaon'ny data. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hotadidintsika fa ny fitaovana noforonina hamakafaka ny angon-drakitra miasa miaraka amin'ireo angona ihany ary tafasaraka amin'ireo olan'ny orinasa - na dia noforonina hamahana azy ireo aza.
Izany no antony nipoitra karazana orinasa hafa. Ireo orinasa ireo dia miavaka amin'ny debugging amin'ny workflow. Izy ireo dia afaka mahita olana marobe amin'ny fizotry ny fandraharahana, mametraka azy ireo eo amin'ny solaitrabe ary miteny amin'ny mpitantana:
Eto, eto, ary etsy! Ampiharo ity paikady fandraharahana vaovao ity dia ho salama ianao!
Saingy toa tsara loatra izany. Ny fahombiazan'ny torohevitra izay tsy mifototra amin'ny fahatakarana ireo fitaovana dia mampisalasala. Ary ireo orinasa mpanadihady dia mazàna tsy mahatakatra ny antony nisehoan'ny olana toy izany, ny antony mahatonga ny andro vaovao hitondra fahasarotana sy lesoka vaovao, ary fitaovana iza no namboarina tsy marina.
Ka voafetra ny ilàn'ireto orinasa ireto irery.
Misy orinasa samy manana ny fahaizany am-barotra sy fahalalana momba ny fitaovana. Ao amin'ireo orinasa ireo, ny rehetra dia variana amin'ny fanakaramana olona manana kalitao lehibe, manam-pahaizana manokana amin'ny fahaizany sy ny fahalalany. Cool. Fa mazàna, ireo orinasa ireo dia tsy mikendry ny hamaha ny olan'ny fifandraisana ao anatin'ny ekipa, izay hitan'izy ireo matetika fa tsy manandanja. Ka rehefa miseho ny olana vaovao dia manomboka ny fihazana mpamosavy - iza no diso? Angamba ireo manam-pahaizana momba ny BI dia nampisavoritaka ny fizotrany? Tsia, tsy namaky ny famaritana ara-teknika ireo mpandahatra programa. Fa amin'ny ankapobeny, ny tena olana dia tsy azon'ny ekipa atao ny mieritreritra ny olana mazava hamaha azy miaraka.
Mampiseho amintsika izany fa na dia ao anaty orinasa fenoina manam-pahaizana manokana aza dia hitaky ezaka bebe kokoa noho izay ilaina ny zava-drehetra raha tsy izany ny fikambanana matotra ampy. Ny hevitra hoe tokony ho olon-dehibe ianao ary tompon'andraikitra, indrindra amin'ny krizy, no zavatra eritreretin'ny olona amin'ny ankamaroan'ny orinasa.
Na ny zanako roa taona lasa any amin'ny akanin-jaza aza toa matotra kokoa noho ny sasany amin'ireo fikambanana niarahako niasa.
Tsy afaka mamorona orinasa mahomby ianao raha tsy amin'ny alàlan'ny fanakaramana manam-pahaizana be dia be, satria tarihin'ny vondrona na departemanta sasany izy ireo. Ka manohy manakarama manam-pahaizana manokana ny fitantanana, saingy tsy misy miova satria tsy miova mihitsy ny firafitra sy ny lojika amin'ny fizotran'ny asa.
Raha tsy manao na inona na inona ianao hamoronana fantsom-pifandraisana ao anatiny sy ivelan'ireto vondrona sy sampana ireto dia tsy hisy dikany ny ezaka rehetra ataonao. Izay no nahatonga ny paikadin'ny fifandraisana sy ny fahamatorana hifantoka amin'i Ahava.
Ny lalàn'i Conway dia ampiharina amin'ny orinasa Analytics
Dimampolo taona lasa izay, nisy mpandahatra fandaharana iray lehibe antsoina hoe Melvin Conway nanolotra sosokevitra iray izay nanjary nalaza ho lalàna lalàn'i Conway:
Fikambanana izay rafi-pandrafetana. . . terena hamokatra endrika izay dika mitovy amin'ny rafitry ny fifandraisana ataon'ireto fikambanana ireto.
Melvin Conway, lalàn'i Conway
Ireo eritreritra ireo dia niseho tamin'ny fotoana nifanarahan'ny solosaina iray tao amin'ny efitrano iray lavorary! Alao an-tsaina fotsiny: eto dia manana ekipa iray miasa amin'ny solosaina iray isika, ary ao dia misy ekipa iray hafa miasa amin'ny solosaina iray hafa. Ary amin'ny tena fiainana, ny lalàn'i Conway dia midika fa ny lesoka rehetra amin'ny fifandraisana izay hita eo amin'ireo ekipa ireo dia ho hita taratra amin'ny firafitra sy ny fiasan'ireo programa novolavolainy.
Ity teôria ity dia efa nosedraina an-jatony tamin'ny tontolon'ny fampandrosoana ary efa noresahana matetika. Ny famaritana azo antoka indrindra ny lalànan'ny Conway dia noforonin'i Pieter Hintjens, iray amin'ireo mpandrafitra fandaharana manan-danja indrindra tamin'ny voalohandohan'ny taona 2000, izay nilaza fa "raha ao anaty fikambanana mahatsikaiky ianao dia hanao rindrambaiko mahatsikaiky." (Amdahl mankany Zipf: lalàna folo amin'ny fizika olona)
Mora ny mahita ny fomba fiasan'ity lalàna ity eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny analytics. Eto amin'ity tontolo ity dia miasa miaraka amina angon-drakitra marobe avy amin'ny loharano samihafa ny orinasa. Azontsika rehetra ekena fa ara-drariny ny angon-drakitra. Fa raha mandinika akaiky ny angon-drakitra ianao, dia ho hitanao ny kileman-tanan'ireo fikambanana nanangona izany data izany:
Ny sanda tsy hita izay tsy niresahan'ny injeniera olana iray
Diso endrika izay tsy nisy nanongilan-tsofina ary tsy nisy nifanakalo hevitra momba ny isan'ny toerana decimal
Mampihemotra ny fifandraisana izay tsy misy mahalala ny endrika fandefasana (batch na stream) ary iza no tsy maintsy mandray ny angona
Izany no antony anehoan'ny rafitra fifanakalozana data tanteraka ny tsy fahalavorariantsika.
Ny kalitaon'ny angon-drakitra dia ny zava-bitan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitaovana, ny manampahaizana momba ny dalambe, ny mpitantana ary ny fifandraisana amin'ireo olona rehetra ireo.
Ny firafitry ny serasera tsara indrindra sy ratsy indrindra ho an'ny ekipa multidisiplinia
Ekipa tetikasa mahazatra ao amin'ny orinasa MarTech na marketing analytics dia misy manam-pahaizana manokana momba ny raharaham-barotra (BI), mpahay siansa momba ny angona, mpamorona, mpivarotra, mpandalina ary mpandahatra fandaharana (na mitambatra).
Fa inona no hitranga amin'ny ekipa iray izay tsy mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana? Andao hojerena. Ireo programmer dia hanoratra fehezan-dalàna mandritra ny fotoana maharitra, manandrana mafy, raha ampahany hafa amin'ny ekipa kosa miandry azy ireo handalo ny batony fotsiny. Farany, hivoaka ny kinova beta, ary himenomenona ny rehetra ny antony naharitra ela. Ary rehefa miseho ny lesoka voalohany dia hanomboka mitady olon-kafa hanome tsiny ny tsirairay fa tsy amin'ny fomba hisorohana ny toe-javatra nahatonga azy ireo ho eo.
Raha mijery lalindalina kokoa isika, dia ho hitantsika fa tsy takatra tsara (na tsia) ny tanjona ifampiresahana. Ary amin'ny toe-javatra toy izany dia hahazo vokatra simba na lesoka isika.
Ny endrika ratsy indrindra amin'ity tranga ity:
Tsy ampy fandraisana anjara
Tsy ampy ny fandraisana anjara
Tsy fahampian'ny fiaraha-miasa
Ahoana no ahafahantsika manamboatra azy io? Ara-bakiteny amin'ny fampitenenana ny olona hiteny.
Andao hiangona ny rehetra, hametraka lohahevitra ifanakalozan-kevitra ary handamina fivoriana isan-kerinandro: marketing miaraka amin'ny BI, mpandrindra programa miaraka amina mpamorona sy manam-pahaizana manokana momba ny angona. Avy eo manantena izahay fa hiresaka momba ilay tetikasa ny olona. Saingy mbola tsy ampy izany satria ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia mbola tsy miresaka momba ilay tetikasa manontolo ary tsy miresaka amin'ny ekipa iray manontolo. Mora ny mahazo azy ambany fihaonana am-polony ary tsy misy lalan-kivoahana ary tsy manam-potoana hanaovana ny asa. Ary ireo hafatra ireo aorian'ny fivoriana dia hamono ny andro sisa sy ny fahatakarana izay hatao manaraka.
Izay no antony voalohany amin'ny fivoriana. Mbola manana olana vitsivitsy izahay:
Tsy fahampian'ny tanjona tanjona
Indraindray, ny olona miezaka manolotra fampahalalana manan-danja momba ilay tetikasa amin'ireo mpiara-miasa aminy. Fa tsy ny hafatra mandeha, ny milina tsaho kosa dia manao ny zavatra rehetra ho azy ireo. Rehefa tsy mahay mizara ny heviny sy ny heviny araka ny tokony ho izy ny olona ary amin'ny tontolo mety dia ho very ny fampahalalana eny an-dalana mankany amin'ilay mahazo azy.
Ireo dia mariky ny orinasa mitolona amin'ny olan'ny fifandraisana. Ary manomboka manasitrana azy ireo amin'ny fivoriana izany. Fa manana vahaolana hafa foana izahay.
Tariho ny rehetra hifampiresaka momba ilay tetikasa.
Ny endrika tsara indrindra amin'ity fomba ity:
Fifanakalozana fahalalana sy fahaiza-manao
Fanabeazana tsy miato
Ity dia rafitra sarotra indrindra izay sarotra ny mamorona. Mety hahalala rafitra vitsivitsy ianao izay mandray an'io fomba io: Agile, Lean, Scrum. Tsy maninona izay anaranao azy; izy rehetra dia miorina amin'ny fitsipika "mampifanaraka ny zavatra rehetra amin'ny fotoana iray". Ireo kalandrie rehetra ireo, filaharana laharana, fampisehoana demo ary fivoriana fitsanganana dia mikendry ny hahatonga ny olona hiresaka momba ilay tetikasa matetika sy miaraka.
Izany no antony tiako be ny Agile, satria misy ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana ho toy ny fepetra takiana amin'ny fahaveloman'ny tetikasa.
Ary raha mieritreritra ianao fa mpandalina tsy mankafy Agile dia jereo amin'ny fomba hafa: manampy anao hampiseho ny valin'ny asanao - ny angon-drakitra voarindrao rehetra, ireo tabilao tsara, ireo angon-drakitrao - hahatonga ny olona mankasitraka ny ezaka ataonao. Fa mba hanaovana an'izany dia mila mihaona amin'ny mpiara-miasa aminao ianao ary miresaka amin'izy ireo eo amin'ny latabatra boribory.
Inona ny manaraka? Nanomboka niresaka momba ilay tetikasa ny rehetra. Izao dia manana isika hanaporofoana ny kalitao an'ny tetikasa. Mba hanaovana izany, matetika ny orinasa dia manakarama mpanolotsaina manana mari-pahaizana matihanina ambony indrindra.
Ny fepetra lehibe indrindra amin'ny consultant tsara (azoko lazaina aminao satria consultant aho) dia mampihena hatrany ny fandraisany anjara amin'ilay tetikasa.
Ny consultant dia tsy afaka mamahana orinasa miafina kely fotsiny amin'ny orinasa satria tsy hahatonga ny orinasa ho matotra sy hahaleo tena. Raha tsy afaka miaina ny orinasanao raha tsy misy ny mpanolo-tsaina anao dia tokony hoheverinao ny kalitaon'ny serivisy azonao.
Etsy ankilany, ny consultant dia tsy tokony hanao tatitra na ho lasa mpivady fanampiny ho anao. Manana ny mpiara-miasa aminao ianao amin'izany.
Ny tanjona lehibe hananana mpanolo-tsaina dia ny fanabeazana, ny fanamboarana ny rafitra ary ny fanamorana ny fifandraisana. Ny andraikitry ny consultant dia tsy ny fanaovana tatitra isam-bolana fa ny fametrahana ny tenany ao amin'ilay tetikasa ary ny firotsahana tanteraka amin'ny fanaon'ny ekipa isan'andro.
Tsara consultant marketing marketing stratejika mameno ny banga amin'ny fahalalana sy ny fahazoana ny hevitr'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa. Saingy mety tsy hanao ny asa velively ho an'ny olona iray izy. Ary indray andro any, mila miasa tsara daholo ny rehetra raha tsy misy ny consultant.
Ny vokatry ny fifandraisana mahomby dia ny tsy fisian'ny mpihaza mpamosavy sy ny fanondroana ny rantsan-tànana. Alohan'ny hanombohana asa iray dia mizara ny fisalasalany sy ny fanontanian'ny olona amin'ny ekipa hafa ny olona. Araka izany dia voavaha ny ankamaroan'ny olana alohan'ny hanombohan'ny asa.
Andao hojerentsika hoe ahoana izany rehetra izany no mitaona ny ampahany sarotra indrindra amin'ny asa fandinihana marketing: ny famaritana ny fikorianan'ny angon-drakitra ary ny fampifangaroana ny angona.
Ahoana ny fahitana ny firafitry ny fifandraisana amin'ny famindrana sy fanodinana data?
Andao hatao hoe manana loharano telo manome antsika ireto angon-drakitra manaraka ireto izahay: angon-drakitra fifamoivoizana, angon-drakitra vokatra e-varotra / angona fividianana avy amin'ny programa fahatokisana ary data momba ny analytics an-tariby. Handalo ny dingana fanodinana data izahay tsirairay, manomboka amin'ny fandefasana izany data rehetra izany mankany amin'ny Google Cloud ka hatrany amin'ny fandefasana ny zava-drehetra hojerena Google Data Studio miaraka amin'ny fanampian'i Google BigQuery.
Miorina amin'ny ohatra asehontsika, inona avy ireo fanontaniana tokony hapetraky ny olona hanome toky azy ireo amin'ny fifandraisana mazava isaky ny dingana fanodinana data?
Dingana fanangonana data. Raha manadino ny refesina zava-dehibe iray isika dia tsy afaka miverina amin'ny lasa ary mamerina mandahatra izany. Zavatra tokony hodinihina mialoha:
Raha tsy fantatsika izay hatao anarana ireo masontsivana sy fari-pahaizana manan-danja indrindra, ahoana no fomba hiatrehantsika ny korontana rehetra?
Ahoana no hanaovana saina ny hetsika?
Inona no ho famantarana tsy manam-paharoa ho an'ny fikorianan'ny data voafantina?
Ahoana no hikarakarantsika ny filaminana sy ny fiainana manokana?
Ahoana no fomba hanangonana data izay misy fetra amin'ny fanangonana angona?
Ny angon-drakitra manambatra dia mikoriana ao amin'ny renirano. Diniho ity manaraka ity:
Ny fotopoto-pitsipika lehibe ETL: karazana famindrana angon-drakitra ve na batch na stream?
Ahoana no hanamarihantsika ny fifangaroan'ny famindrana angon-drakitra sy angona?
Ahoana no hanitsiana azy ireo amin'ny schema data mitovy nefa tsy misy fatiantoka sy lesoka?
Fanontaniana momba ny fotoana sy ny vanim-potoana: Ahoana ny fomba hijerentsika ireo famantaranandro?
Ahoana no ahafantarantsika raha miasa araka ny tokony ho izy ny fanavaozana ny data sy ny fampivoarana?
Ahoana no hanamarinanay ny fitsapana? Inona no mitranga amin'ny fitendrena tsy mety?
Dingana fanangonana data. Zavatra tokony hodinihina:
Fikirana manokana ho an'ny fizotry ny ETL: Inona no ifandraisantsika amin'ireo angona tsy marina?
Patch sa mamafa?
Afaka mahazo tombony amin'izany ve isika?
Ahoana ny fiantraikany amin'ny kalitaon'ny data napetraka?
Ny fitsipika voalohany amin'ireo dingana rehetra ireo dia ny fihoaram-pefy mifampitaingina sy mifandova. Ny angona nangonina nisy lesoka tamin'ny dingana voalohany dia handoro ny lohanao mandritra ireo dingana manaraka rehetra. Ary ny fitsipika faharoa dia ny tokony hisafidiananao teboka hahazoana antoka ny kalitaon'ny data. Satria eo amin'ny sehatra fanangonana, ny data rehetra dia hifangaro, ary tsy ho azonao atao ny mitaona ny kalitaon'ny data mifangaro. Tena zava-dehibe izany ho an'ny tetik'asa fianarana milina, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny valin'ny fianarana milina ny kalitaon'ny data. Ny vokatra tsara dia tsy tratry ny angona ambany kalitao.
Ity ny sehatra CEO. Mety efa naheno momba ny toe-javatra ianao rehefa nijery ireo isa teo amin'ny solaitrabe ny CEO ary nilaza hoe: ? " Ary amin'izao fotoana izao dia tara loatra ny mitady ireo lesoka, satria tokony ho efa tratra ela be izy ireo.
Miorina amin'ny fifandraisana ny zava-drehetra. Ary amin'ny lohahevitry ny resaka. Ity misy ohatra iray momba izay tokony horesahina mandritra ny fanomanana ny streaming Yandex:
Miaraka amin'ny ekipanao iray ihany no hahitanao ny valin'ny ankamaroan'ireto fanontaniana ireto. Satria rehefa misy mandray fanapahan-kevitra miorina amin'ny vinavina na hevitra manokana nefa tsy mizaha toetra ny hevitra amin'ny hafa, dia mety hiseho ny lesoka.
Be pitsiny ny toerana rehetra, na dia amin'ny toerana tsotra indrindra aza.
Ity misy ohatra iray hafa: Rehefa manara-maso ny isa momba ny karatra vokatra dia mahatsikaritra ny lesoka iray ny mpandalina. Ao amin'ny angon-drakitra malaza, ny fahatsapana rehetra avy amin'ny sora-baventy rehetra sy ny karatry ny vokatra dia nalefa taorian'ny fanoratana pejy. Saingy tsy azontsika antoka raha tena nijery ny zava-drehetra tao amin'ilay pejy ilay mpampiasa. Tonga tao amin'ny ekipa ilay mpandalina mba hampahafantatra azy ireo amin'ny antsipiriany izany.
Nilaza ny BI fa tsy afaka miala amin'ny toe-javatra toy izany isika.
Ahoana no ahafahantsika mikajiana ny CPM raha tsy azontsika antoka akory hoe naseho ny vokatra? Inona ny CTR mahafeno fepetra amin'ny sary avy eo?
Namaly ireo mpivarotra:
Jereo daholo, afaka mamorona tatitra mampiseho ny CTR tsara indrindra isika ary manamarina izany amin'ny sainam-pamoronana na sary mamorona any amin'ny toerana hafa.
Ary avy eo dia hiteny ireo mpamorona hoe:
Eny, afaka hamaha ity olana ity izahay amin'ny alàlan'ny fampidirana vaovao anay amin'ny fanarahan-dia ny horonam-boky sy ny fizahana ny fahitana ny lohahevitra.
Ary farany, nilaza ny mpamorona UI / UX:
Yeah! Azontsika atao ny misafidy raha mila ilay horonana na pagination mandrakizay na farany isika!
Ireto ny dingana nolalovan'ity ekipa kely ity:
Namaritra ny olana
Naseho ny vokadratsin'ity olana ity
Nandrefy ny fiantraikan'ny fanovana
Fanapahan-kevitra ara-teknika natolotra
Nahita ny tombom-barotra tsy misy dikany
Mba hamahana io olana io dia tokony hanamarina ny fanangonana angona avy amin'ny rafitra rehetra izy ireo. Ny vahaolana ampahany amin'ny ampahany amin'ny schema data dia tsy hamaha ny olan'ny orinasa.
Izany no antony tsy maintsy iarahantsika miasa. Ny angon-drakitra dia tsy maintsy angonina tompon'andraikitra isan'andro, ary asa mafy ny fanaovana an'io. Ary ny kalitaon'ny data tsy maintsy tanterahina amin'ny fanofana olona marina, fividianana fitaovana mety, ary fampiasam-bola, fotoana ary ezaka amin'ny fananganana rafitry ny fifandraisana mahomby izay tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny fikambanana.
Tags: BigQueryaggregation dataangona famindranaData Visualizationstudio data data googleserasera marketingowox biYandexyonder metrica
Mariia dia Executive Development Development manana traikefa 6+ taona, ao anatin'izany ny marketing sy ny fitantanana vokatra. OWOX BI dia mametraka analytics farany sy farany ary manavao ny tatitra momba ny fanentanana doka, famakafakana ny vondron'olona, ​​ROPO, CPA, ROI, ROAS, LTV, СА,,, ary ny maro hafa.